I-Christian Revival Church Implements AV Isombululo kwi-Design Blackmagic - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, Umsasazo osemthethweni we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-Christian Revival Church Implements AV Isisombululo kwi-Design Blackmagic
I-Christian Revival Church Implements AV Isisombululo kwi-Design Blackmagic
Fremont, CA - Julayi 11, 2019 - Blackmagic Design Namhlanje ivakalise ukuba isebe elitsha kwiCawa yamaKrestu eMvuselelo yamaKristu eMzantsi Afrika (CRC) lifake isisombululo se-AV esisisiseko esisekelwe kwi-ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K kunye ne-ATEM 1 M / E ephakamileyo.
Ngamabandla angaphezu kwe-90 kulo lonke elaseMzantsi Afrika, kwaye ngaphezu kwe-15 jikelele, kuquka iLondon, i-Amsterdam ne-Perth, i-CRC yasungulwa kwi-1994 ngabafundisi abakhulu, e-Boshoff kunye nomkakhe uNyretta Boshoff, eBloemfontein. I-CRC isebenzisa iteknoloji ukudibanisa iiindawo ezininzi ngexesha leenkonzo ezinobomi, kunye nevidiyo edlala indima ebalulekileyo ekuphatheni kwecawa ukuxhuma kunye nehlabathi elikhulu kwaye lifike ngaphaya kwemida yalo.
I-auditorium entsha e-Johannesburg, ephethe abantu abaphezulu be-5,500, ifuna isisombululo sesibini. "Inkqubo ayifuni nje ukuba ikwazi ukusasaza ukusasazwa komdla kodwa iphinde isingathe izidingo zethu zomsindo ngaphakathi kwendlu," iqala uFrancois Griesel, unjiniyela oyintloko wokusasaza kwi-CRC.
Ukongeza: "Nantoni na esiyifumene nayo kwakufuneka igawule iteknoloji, ivule igunya lethu lokubambisana nomntu wanamhlanje."
Inkxalabo incike ekuhambeni komsebenzi obandakanya i-Blackmagic URSA Broadcast for acquisition kunye ne-ATEM 4 M / E Broadcast Studio ye-4K yokushicilela ukuxuba umboniso. "Siqale siqesha i sixhobo ukuba sivavanye kwisiganeko esiphila ePitoli," utyhila uFrancois. "Amandla okuvelisa kunye nomgangatho ogqithiseleyo kukho konke okulindelweyo, kwaye xa ubeka ingqalelo kwinqanaba lentengo, liqinisa inkolelo yethu yokuba Blackmagic Design kwakuyindlela yokulandela kwaye ityala. "
Ikomiti yokuvelisa iqukethe abasebenzi ababini abagciniweyo, kunye namavolontiya e-12-14. "Ngoko ke, inkqubo kufuneka ibe nekhono kakhulu kodwa ilula ngokwaneleyo kubaqhubi abangaphantsi kwamava ukuba bafikelele," kusho uFrancois. "Sixhomekeke kwiiplanga ze-harlem ze-ATEM ze-ATEM 1 M / E ukudala i-mix mix program; enye ye-AV yangaphakathi kuquka ukuboniswa kwe-IMAG kunye nesibini ukusabalalisa iinkonzo kwezinye iiklasi ze-CRC. "
Ukongezelela, iqela lithembele kwi-Blackmagic SmartScope Duo 4K ifom yefayile ekuncedeni umbala ukufanisa iimpawu zekhamera ezingenayo usebenzisa i-ATEM yeComputer Control Panel, enika izilawuli ezikude ezizimeleyo ukuya kwi-URSA. I-HyperDeck Studio Pro irekhoda i-TX inkosi, ngelixa ezintathu ze-HyperDeck Minis zinika amandla okurekhoda nganye ikhamera ye-ISO ngokwahlukileyo.
"Ukusebenzisa i-SDM ye-Blackmagic, sakwazi kwakhona ukuphuhlisa isisombululo semifanekiso esisiko, esekelwe kwi-PC ephakamileyo eziphambili ezixhotywe kwi-DeckLink Duo kunye namakhadi okudlala. Oku kusenza sikwazi ukugqithisa imifanekiso njengengoma yomculo kunye nemiyalezo ebandleni njengenxalenye yomxube weprogram, "kuchaza uFrancois.
Kwiimifudlana ephilayo, iRCC isebenzisa Teradek i-encoders kunye ne-decoders kwi-tandem ne-Blackmagic Teranex Mini Audio kwi-SDI kunye ne-SDI kubaguquleli be-Audio ukuxhuma kunye nokususwa kwe-audio.
"Ngeendawo ezinzulu zokuvakasha, i-video ye-CRC eyenza umntu ngamnye azive engxenyeni ye-CRC yoluntu, kwaye ukusasazwa ngokusasaza oku kuqhube ngakumbi ukuzisa amabandla ndawonye kwiilizwekazi," ugqiba uFrancois. "Ngenxa yokuphumelela kwesi sitsha esitsha, ngoku siye saphucula ubuchule bokuvelisa kwi-campus yethu ephakamileyo, i-CRC ePitoli, nge-Blackmagic URSA Broadcast kunye ne-ATEM."
Imveliso yomfanekiso we-Blackmagic URSA Ukusasazwa, i-ATEM 4 M / E Isasazo se-Studio 4K, i-ATEM I-Panel Control Panel, i-ATEM 1 M / E i-Advanced Panel, i-HyperDeck Studio Pro, iTreex Mini Audio kwi-SDI, i-Teranex Mini SDI kwi-Audio, i-DeckLink Duo kunye nayo yonke into Blackmagic Design iimveliso ziyafumaneka www.blackmagicdesign.com/media/images.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw mveliso SJGolden - SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-07-11
Previous: Umklami weZibonelelo / uMbonisi weMboniselo oyiMatriki (iMvumelwano / i-Freelance)
next: I-Sigma ibonisa i-Sigma fp Ikhamera epheleleyo yeKhokhethi engenakuso; Uzisa i-High-Performance Lens Series yeeNkqubo zeKhamera eziKhatywayo